Avanafil (330784-47-9) Warshadaha alaabooyinka soosaaraha
Avanafil waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo kacsanaanta kacsiga (ED: kacsanaanta; itaal darida in ragga ama kacsi kacsanaan ku dhacdo ragga). Avanafil wuxuu ku jiraa fasalka dawooyinka loo yaqaan 'phosphodiesterase (PDE)' inhibitors. Waxay ku shaqeysaa iyadoo la kordhiyo qulqulka dhiigga ee guska inta lagu jiro kicinta galmada. Kororka socodka dhiigga wuxuu sababi karaa kacsanaan. Avanafil ma daaweydo kacsanaanta kacsiga ama kordhinta damaca galmada. Avanafil kama hortagto uur qaadida ama faafitaanka cudurada galmada sida Fayraska difaaca jirka ee bina aadamka (HIV, cagaarshowga B, jabtada, waraabowga) .Si aad u yareyso halista cudurka, had iyo jeer isticmaal hab caqabad ku ool ah (latex ama polyurethane kondhom / dam daminta ilkaha) inta lagu jiro dhammaan galmada. La tasho dhaqtarkaaga ama farmashiistaha si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah.
Macluumaadka Saldhigga Budada ee Avanafil
magaca Budada Avanafil
Muuqaal budo White
isku dayo ≥99%
milmi biyo-u-dhaansanaan kara biyo ama aalkolo, oo lagu milmay Acetic acid, ethyl ester.
Miisaanka kelli 483.95g / mol
Formula kelli C23H26ClN7O3
Waqtiga bilowga 30minutes
Fasalka Fasalka Pharmaceutical
Ma ogtahay in in kabadan 30 milyan oo rag ah oo ku nool Mareykanka ay qabaan howlgab kacsi (ED)? Taasi waxay sharraxaysaa sababta ay u jiraan dawooyin badan oo ED ah oo lagu iibiyo Maraykanka. Mid ka mid ah daroogada noocaas ah waa avanafil. Stendra waa magaca sumadda avanafil inaad aqoon u leedahay.
Avanafil (Stendra) waa PDE-5 (fosfodiesterase-type 5) xakameeyaha xannibaya PDE-5.
Markaad daawadan qaadato, waxay nasin doontaa xididdada dhiigga iyo muruqyada jirkaaga qaarkood si ay kaaga caawiso inaad kacsato adoo kordhinaya socodka dhiigga ee guskaaga. Sababtaas awgeed, waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn (ED). Sida Levitra® (vardenafil), Cialis® (tadalafil), iyo Viagra® (sildenafil), avanafil ayaa kuu fududeyn doonta inaad kacsato oo aad dayactirto kacsiga in muddo ah.
Avanafil (Stendra®) waa mid ugub ah, oo 2000, ay soo saartay Mitsubishi Tanabe Pharma oo ku taal Japan. Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) ayaa ansixiyay daawada bishii Abriil 2012 daaweynta ED, halka Hay'adda Dawooyinka Yurub (EMA) ay ansixisay Juun 2013.
Inbadan dib u eegista avanafil, waxaad ogaan doontaa inay leedahay waxyeelo yar marka loo eego Levitra, Cialis, Viagra, iyo daawooyinka kale ee ED.
Aynu hoos u qodno oo wax badan ka ogaanno daroogada.
Sidee Avanafil Ula Dhaqmaa Cilad Kacsi
Avanafil waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo ED ama awood la'aan, taas oo lagu qeexay awood la'aanta helitaanka iyo ilaalinta kacsiga. Avanafil wuxuu ku dhacaa qaybta daawooyinka xakameynaya fosfoorasterase.
Xusuusnow si aad kacsi u hesho, xididdada dhiiggaaga xubinta taranka ee dhiigga waxaa ka buuxsama dhiig. Tani waxay dhacdaa markii cabirrada marinnada dhiigga ay kordhaan, sidaas awgeedna dhiig badan ugu gudbiyaan guskaaga. Isla mar ahaantaana, cabirka marinnada dhiigga ee dhiigga ka qaadaya guskaaga ayaa hoos u dhacaya taas oo hubinaysa in dhiiggu ku sii nagaado muruqyadaada xubinta taranka, sidaas awgeedna kor u qaadista kacsiga muddo dheer.
Marka galmada lagugu kiciyo, waa inaad kacsataa. Kacsani waxay ka dhigi doontaa guskaaga inuu sii daayo nitric oxide, oo ah xarun sababi doonta guanylate cyclase (enzyme) si loo soo saaro cGMP (cyclic guanosine monophosphate), oo ah farriin muhiim ah oo intracellular ah oo habeysa habab badan oo jireed.
Xaqiiqdii, waa nucleicide-ka wareegga ah ee mas'uul ka ah nasashada iyo foosha marinnada dhiigga ee ka qaada dhiigga iyo guska si uu u kaco. Marka enzyme kale uu burburiyo cGMP, xididdada dhiigga ayaa dib u soo ceshanaya cabbirradooda asalka ah taasoo keenta in dhiiggu ka tago xubinta taranka, taasina waxay calaamadeyn doontaa dhammaadka kacsiga.
Markaad qaadatid avanafil, waxay ka joojin doontaa PDE-5 inuu burburiyo cGMP, taasoo la micno ah in cGMP uu sii dheeraan doono isla markaana sii wadi doono koritaankaaga. Muddada uu sii jirayo cGMP-ka, ayaa sii dheeraanaya dhiigu ku sii nagaan doono guskaaga isla markaana uu sii dheeraan doono kacsigaagu.
Avanafil (Stendra) miyuu waxtar u leeyahay Daaweynta Qalitaanka Qalitaanka?
In kasta oo avanafil (Stendra) ay tahay daawo cusub oo loo yaqaan 'ED', haddana daraasado badan ayaa caddeeya waxtarkeeda daaweynta ED. Qaar ka mid ah shan daraasadood oo la sameeyay 2014 si loo ogaado in daroogadani waxtar leedahay, in ka badan 2,200 ragga ayaa ka qayb qaatay, dhammaantoodna waxay lahaayeen cillad aan caadi ahayn.
Dhamaadka daraasadaha, avanafil waxaa lagu ogaadey inuu aad waxtar ugu leeyahay hagaajinta IIEF-EF, tusmada caalamiga ah ee loo adeegsadey in lagu qiimeeyo dhibaatooyinka la xiriira kacsiga.
Dhamaan ragga qaatay daroogadaani waxay muujiyeen horumarin la taaban karo oo ku saabsan IIEF-EF markay qaateen oo u dhexeeyay 50 ilaa 200mg. Natiijooyinka cilmi-baarista ayaa sidoo kale muujiyay in avanafil uu waxtar badan ku yeeshay qiyaasta sare ee 200mg. Tani waxay ka duwan tahay avanafil daroogooyinka kale ee ED ee sababa dhibaatooyinka soo raaca ee qiyaasta sare.
Daraasad kale oo lagu sameeyay 2012, avanafil waxaa lagu ogaadey inuu si fiican ugu dulqaatay aadna waxtar ugu leeyahay daaweynta ED. Laba ka mid ah raggii kaqeyb qaatay daraasadda ayaa muujiyey horumar la taaban karo oo laga helay qiyaasta u dhexeysa 100 illaa 200mg.
Tijaabooyinka kiliinikada ee ku lug leh avanafil, cilmi baarayaashu waxay soo sheegeen inay muujineyso kor u kac weyn oo tirakoob ku ah dhammaan doorsoomayaasha waxtarka leh ee la xiriira ED. Tijaabooyinkani waxay ku lug lahaayeen in ka badan ragga 600 ee da'da da'da ee 23 - 88.
Si kooban, avanafil wuxuu wax ku ool u yahay daaweynta ED. Daraasado dhowr ah ayaa caddeeyay inay soo saari karto horumarin la qiyaasi karo oo muhiim ah oo ku saabsan koritaanka ragga oo dhan oo leh ED, iyadoon loo eegin da'dooda.
Ka Wanaagsan Avanafil ama Tadalafil?
Avanafil waa daawada ugu cusub ee ED ee suuqa, laakiin waxay ka fiicantahay daawooyin badan oo ED ah. Labada Avanafil ama Tadalafil labadaba waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn, laakiin waxay ku kala duwan yihiin qaabkooda ficil ahaan.
In kasta oo tadalafil (Cialis) uu yahay daawo wax ku ool u leh qanjirka 'prostate' iyo astaamaha cillad la'aanta kacsiga, Stendra badanaa waa xulashada koowaad ee kuwa cillad aan caadi ahayn leh.
Avanafil vs Tadalafil: Keebaa dhaqso u shaqeeya?
Tadalafil iyo dawooyinka kale ee kacsiga kacsiga jiilka kowaad waxay qaataan inta udhaxeysa 30 daqiiqo ilaa hal saac saameyntooda in la dareemo. Xaaladaha qaarkood, ka dib markaad cuntay wax culus, daroogadu waxay qaadan kartaa in ka badan hal saac si ay u bilaabaan inay shaqeeyaan. Tani maaha kiiska avanafil.
Haddii aad qaadatid inta udhaxeysa 100 - 200mg ee sheyga, waxaad dareemi doontaa saamaynta avanafil 15 daqiiqo gudahood. Micnaha waad qaadan kartaa daqiiqado yar kahor intaadan bilaabin galmada. Xitaa haddii aad qaadato qadar yar oo ah 'avanafil', waxaad dhahdaa 50mg, wali waxaad kacsan doontaa 30 daqiiqo gudahood.
Avanafil vs Tadalafil: Keebaa Yeelanaya Waxyeelo Yar?
In kasta oo avanafil uu leeyahay waxyeellooyin qaarkood, haddana waxyeellooyinkan ayaan u badnayn sida kuwa loo yaqaan 'tadalafil'. The waxyeelada avanafil sidoo kale maaha kuwo u xun sida kuwa tadalafil. Tusaale ahaan, avanafil uma badna inuu keeno cadaadis dhiig oo hooseeya iyo araga oo daciifa; labada waxyeellooyin ee la xiriira tadalafil iyo daawooyinka kale ee ED.
Faa'iidada kale ee avanafil ayaa ah in lagu qaadan karo qadar sare iyadoo aan la keenin wax saameyn ah. Xaqiiqdii, qiyaaso sare oo ilaa 200mg ah ayaa la qaadan karaa iyada oo aan laga walwalin waxyeellooyin kasta.
Avanafil wuxuu u dhaqmaa si ka duwan tadalafil maxaa yeelay wuxuu bartilmaameedsanayaa fosfodiesterase-type 5 enzyme, iyada oo aan la weerarin enzymesyada kale ee loo yaqaan 'phosphodiesterase enzymes' sida PDE11, PDE6, PDE3, iyo PDE1.
Avanafil Cunto saameyn kuma lahan.
Tadalafil iyo jiilka koowaad ee dawooyinka cillad la'aanta erectile inta badan waxtar yar kadib markay cunaan cunnooyinka waaweyn ee cuntooyinka leh dufanka badan. Tani waxay ka dhigeysaa caqabad weyn in la adeegsado maadaama ay tahay inaad ilaaliso waqtiga cunnadaada sidoo kalena aad xasaasi u tahay waxaad cunayso.
Dhinaca kale, avanafil wax saameyn ah kuma lahan cuntada la cuno, taas oo macnaheedu yahay inaad ku raaxeysan doonto saameynta avanafil waqti kasta oo aad wax cunayso iyo waxaad cunaysoba. Sababtaas awgeed, xitaa way kafiican tahay inaad cuntid cuntooyinka tamarta sare leh kahor intaadan isticmaalin dawadan si aad uhesho tamar kugufiican xaga galmadaada.
Avanafil vs Tadalafil: Keebaa Loo Isticmaali Karaa Khamriga?
Waxaa lagugula talinayaa inaad xaddido ama ka fogaato aalkolada markaad ku jirto dawada tadalafil. Tadalafil waxaa loo yaqaanaa inay hoos u dhigto cadaadiska dhiigga, sidaas darteed qaadashada khamriga waxay sii yareyn kartaa cadaadiska dhiigga ee heerarka ba'an.
Qaadashada daroogadan khamriga waxay la xiriirtaa calaamadaha sida wadna garaaca wadnaha, madax xanuun, madax wareer, miyir beelid, madax xanuun, iyo wareer. Dhinaca kale, Stendra aad ayey ammaan ugu tahay in la isticmaalo, xitaa ka dib marka ay khamri cabto. Waad ku raaxeysan kartaa illaa saddex khamri ka hor intaadan qaadan Stendra, mana jiri doonaan waxyeellooyin iyo waxyeellooyin kale oo caafimaadkaaga ah.
Si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maaha inaad aadi karto qashin ka dibna isticmaal Stendra. Waa inaad u isticmaashaa khamriga si dhexdhexaad ah maadaama khamriga laftiisu sidoo kale uu sababo dhibaatooyin caafimaad. Khamrigu waa dawo dejiye, markii aad wax badan ka isticmaashidna waxay yaraynaysaa rabitaankaaga galmada waxayna kugu adkeyneysaa kacsiga. Waxay macnaheedu tahay aalkolada ayaa diideysa waxa ay daawooyinka ED ujeedkoodu yahay inay gaaraan.
Sida la arki karo, avanafil wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah tadalafil. Taasi waa sababta dhakhaatiirta badani ay jecel yihiin inay ugu qoraan bukaankooda.
Maxay Daroogooyinka Kale Doonaan Saameyn ku yeesho Avanafil?
In kasta oo daroogooyinka qaarkood aan loo isticmaali karin isku-darka, qaar ayaa la isku dari karaa si kor loogu qaado waxtarkooda. Daawooyinka aan la isku dari karin waa kuwa is dhexgala isla markaana sababa saameyn xun. Taasi waa sababta ka hor intaan lagugu dhagin wax daawo ah, la socodsii haddii aad horey u qaadatay daroogo kale. Tani sidoo kale waa inay noqotaa kiiska haddii aad rabto inaad beddesho daroogada ama qiyaasta. Waxba ha sameynin kaligaa adigoon ku lug laheyn bixiyahaaga daryeelka caafimaadka.
Tusaale ahaan, waxaa si adag lagugula talinayaa inaad isticmaasho avanafil oo lagu daro daawooyinka sida Levitra, Staxyn (vardenafil), tadalafil (Cialis), ama Viagra (sildenafil). Daawooyinkan waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo ED iyo dhiig-karka halbowlaha (sambabada). Markaa iyaga oo la adeegsado avanafil waxay culeys badan saari karaan jirkaaga waxayna sababi karaan waxyeelo daran.
Kahor intaadan bilaabin isticmaalka avanafil, la socodsii bixiyahaaga caafimaadka haddii aad qaadatid daawooyin kale, gaar ahaan:
Daawooyinka loo isticmaalay in lagu daaweeyo cillad kacsi.
Antibiyootiko kasta sida telithromycin, erythromycin, clarithromycin, iyo kuwa kale
Dhammaan daawooyinka antifungal, oo ay ka mid yihiin ketoconazole, itraconazole, iyo kuwo kale
Dawo kasta oo loo isticmaalo daaweynta cudurka qanjirka 'prostate' ama dhiig karka, oo ay ku jiraan tamsulosin, terazosin, silodosin, prazosin, doxazosin, alfuzosin, iyo kuwa kale.
Dawooyinka cagaarshowga C sida telaprevir iyo boceprevir iyo kuwa kale.
Dawooyinka HIV / AIDS sida saquinavir, ritonavir, indinavir, atazanavir, iyo kuwa kale.
Liisaska kor ku xusan sinnaba looma buuxin karo. Waxaa jira daawooyin kale sida Doxazosin iyo Tamsulosin oo marka lala isticmaalo avanafil ay ka dhalan doonto waxyeelo daran. Intaa waxaa sii dheer, dawooyin kale oo badan oo miiska laga iibsado iyo kuwa dhakhtar qoro ayaa la falgeli kara avanafil. Kuwaas waxaa ka mid ah waxyaabaha dhirta laga helo iyo fiitamiinno. Qeybta ugu hooseysa ayaa ah inaadan isticmaalin wax daroogo ah oo lagu daro avanafil iyadoo uusan ka warqabin dhakhtarkaagu.
Ma aha oo kaliya daroogooyinka ay tahay inaad ka feejignaato, laakiin sidoo kale waa inaad taxaddar muujisaa markaad leedahay xaalado caafimaad oo salka ku haya. Marka kahor intaadan isticmaalin avanafil, u sheeg dhakhtarkaaga haddii aad leedahay mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee soo socda.
Guska aan caadiga ahayn - haddii aad leedahay guska qalooca ama guskaagu leeyahay xoogaa naafonimo ah oo lagu dhasho, waxaa jira fursado badan oo caafimaadkaagu saameyn ku yeelan karo haddii aad isticmaasho avanafil.
Haddii aad tahay 50 sano jir ama ka weyn
Haddii aad ka cabaneysid saxmad badan, cudurka halbowlayaasha wadnaha, ama indhahaagu waxay leeyihiin saamiga koob-ilaa-disk oo hooseeya, iyo haddii aad ka cabaneysid wadno xanuun ama sonkorow, heerarka dufanka badan ee dhiigga (Hyperlipidemia) ama dhiig sarreeya cadaadis (dhiig kar)
Xaaladaha kale ee ay tahay inaad u keento dhakhtarkaaga waxa ka mid ah:
Dhibaatooyin daran oo xagga indhaha ah
Xanuun daran oo xabadka ah (angina)
Wadne garaac aan caadi ahayn (arrhythmia)
Dhibaatooyinka xididdada dhiigga sida idiopathic subaortic stenosis ama aortic stenosis
Wadne xanuun soo maray lixdii bilood ee la soo dhaafay.
Wadnaha oo ku fashilmay wadnaha
Taariikhda sigaar cabista
Cadaadis dhiig oo hooseeya (hypotension)
Xanuunada indhaha ku dhaca
Stroke lixdii bilood ee la soo dhaafay
Ciladaha dhiig baxa
Kansarka dhiigga la xiriira (leukemia ama myeloma badan)
Sickle-cell anemia, iyo kuwa kale
Xakameeyayaasha PDE5, Stendra ayaa lagu daray, waxay la falgalaan qaar ka mid ah xannibaadayaasha CYP3A4 iyo alfa-xannibaadayaasha. Sababtaas awgeed, waa muhiim inaad u sheegto dhakhtarkaaga haddii aad isticmaaleyso daawooyinkan. Guud ahaan, avanafil waa shey wax ku ool ah oo amaan ah oo loogu talagalay daaweynta ED.
Avanafil waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad aan caadi ahayn. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka avanafil waxaa ka mid ah xaqiiqda ah inay u shaqeyso si ka dhakhso badan dhammaan daawooyinka kale ee loo isticmaalo daaweynta ED. Waxaad ku qaadan kartaa shan iyo toban daqiiqo ka hor intaadan galmoodin welina waxtar ayey yeelan doontaa.
Faa'iidada kale ee avanafil ayaa ah inaadan u baahnayn inaad maalin walba u qaadato si aad waxtar u yeelato, waad u qaadan kartaa sida iyo goorta aad u baahan tahay. Avanafil sifiican ayuu jirka ugu dulqaadan karaa waxaana laguqaadan karaa cunno ama ha cunin. Avanafil ma lahan waxyeellooyin badan sida daawooyinka kale ee ED, adiguna sidoo kale waad qaadan kartaa ka dib markaad cabto aalkolo.
Daaweynta ED waa mid ka mid ah avanafil adeegsado. Badeecadan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa daaweynta dhacdooyinka Raynaud, cilad keenta in qayb ka mid ah jirka ay dareemaan qabow iyo kabuubyo. Xaaladda Raynaud waxay dhacdaa markii uu yaraado socodka dhiigga ee qaybta jirka, sida sanka, jilbaha, ibta, suulasha, iyo dhegaha. Xaaladdan ayaa sidoo kale keenta isbeddelada midabka maqaarka.
Sida looga Faa'iidaysto wax badan Avanafil
Avanafil ayaa kaa caawin doona inaad kacsato, laakiin taasi micnaheedu maahan inaad ka takhalusi karto ciyaarta hore. Markaa kahor intaadan galmo sameyn, lammaanahaaga kaqeyb gal hore sida aad u sameyn laheyd adigoon daawo qaadan. Xusuusnow in avanafil kaliya ay kaa caawin doonto inaad kacsato markii kacsi galmo lagugu kiciyo.
Ha cabin aalkolo badan intaadan isticmaalin avanafil. Aalkolo badan ayaa kaa hor istaagi doonta inaad ku raaxeysato saameynta avanafil gebi ahaanba. Isku darka khamriga iyo avanafil waxay sababi karaan waxyeelo sida dawakhaad taas oo hoos u dhigaysa galmadaada iyo waxqabadkaaga.
Ka fogow cabitaanka casiir canab ah 24 saacadood gudahood oo aad qorsheyneyso inaad qaadatid avanafil oo aad galmo sameysid. Casiirka cinabka wuxuu ka kooban yahay kiimikooyin gaar ah oo kordhin doona heerarka avanafil ee dhiiggaaga sidaa darteedna kordhinaya fursadaha inaad la kulanto waxyeellooyin qaarkood.
Ku sharfe ballamahaaga daryeel caafimaad bixiyaha si uu ula socdo horumarkaaga. Haddii aad ku guuldareysato inaad kacsato xitaa ka dib markaad qaadatid avanafil oo aad ku lug yeelatid ciyaarta hore, ama haddii aad kacsato, laakiin kuma sii jirto waqti dheer oo ku filan inaad galmo sameyso oo aad gaarto kacsiga, waxaad u baahan tahay inaad u sheegto dhakhtarkaaga.
Isla sidaas ayaa lagu dabaqayaa haddii avanafil ay u muuqato inuu adiga kugu awood badan yahay; marka kacsigaagu umuuqdo inuusan libdhi doonin galmada kadib. U sheeg dhakhtarkaaga tan si uu u yareeyo qiyaastaada. Sidoo kale, xusuusnow inaadan qaadan avanafil ka badan waxa dhakhtarkaagu kuu qoro.
Isticmaalka Avanafil (Stendra)
Si avanafil u noqoto mid waxtar leh, way ku caawin doontaa haddii aad u qaadatid sida dhakhtarkaagu kuu qoray. Dhakhtarka ayaa kuu sheegi doona inta aad qaadanaysid iyo wakhtiyada aad qaadan doontid.
Sida dawooyinka kale ee cillad kacsiga, avanafil way fududahay in la isticmaalo. Dawadu waxay ku timaadaa budo ama qaab kiniin ah. Maadaama avanafil dhaqso u dhaqmo, waxaad u baahan tahay inaad qaadatid inta u dhexeysa 15 - 30 daqiiqo kahor galmada. Haddii dhakhtarkaagu kuu qoray qadar yar oo ah avanafil, waxaad dhahdaa 50mg maalintii, waxaa lagugula talinayaa inaad daawada qaadato ugu yaraan 30 daqiiqo kahor galmada. Taasi waa habka ugu wanaagsan ee lagu hubiyo in jirkaagu si buuxda u nuugo daawada. Waxaa xusid mudan inaad qaadan karto budada avanafil markaad gaajooto wax saameyn taban ah kuma yeelan doono jirkaaga.
Waxaa lagugula talinayaa inaad qaadato dawadan hal mar maalintii oo keliya. Bixiyahaaga daryeel caafimaad ayaa kormeeri doona sida jirkaagu uga jawaabo daawada waxaana laga yaabaa inuu kugu hagaajiyo qiyaasta si aad u hesho faa'iidooyinka buuxa ee avanafil.
Ahaanshaha daawo qoro, waa inaad la hadashaa dhakhtarkaaga si uu kuu siiyo rijeeto kahor iibso avanafil. Dhakhtarku wuxuu ku weydiin doonaa dhowr su'aalood, haddii ay suurtagal tahayna, wuxuu sameeyaa tijaabooyin qaarkood si uu kaaga caawiyo go'aaminta qiyaasta avanafil ee kugu habboon adiga oo kuxiran guud ahaan caafimaadka, da'da, iyo daawooyinka kale ee aad isticmaali karto. Ku dhaji avanafil wuxuu adeegsadaa sida ku cad macluumaadka ku qoran calaamadda alaabta ama sida uu ku tilmaamay dhakhtarkaagu. Xusuusnow in avanafil uusan daaweynin xaalado caafimaad oo aan ka aheyn dhacdada ED iyo Raynaud.
Avanafil waxaa lagu heli karaa seddex awood oo kala duwan: 50, 100, iyo 200mg. Waxay u badan tahay in dhakhtarkaagu kugu bilaabi doono xoogga 100mg, laakiin wuxuu beddeli karaa qiyaasta iyadoo kuxiran sida jidhkaagu uga jawaabo. Waqti kasta oo aad iibsato budada avanafil, hubi sumadda si aad u hubiso inaad leedahay awoodda saxda ah ee laguu qoray.
Qiimeynta ED waa inay kujirtaa qiimeyn caafimaad oo dhameystiran si loo ogaado inay jiraan sababo salka ku haya, iyo sidoo kale go'aaminta xulashooyinka kale ee daaweynta. Tusaale ahaan, isku darka arrimaha nafsaaniga ah iyo jirka ayaa sababi kara ED.
Xaaladaha jireed qaarkood waxay gaabiyaan jawaabta galmada taasoo keenta walaac saameyn ku yeelan kara waxqabadka galmada. Marka xaaladahaas la daweeyo, galmo-wadaha waa la soo celin karaa. Sababaha jireed ee guud ee ED waxaa ka mid ah:
Atherosclerosis (xididdada dhiigga ee xiran)
Cudurka dheef-shiid kiimikaadka - Tani waa xaalad ay ku kordhayaan cadaadiska dhiigga, heerarka insulin, kolestaroolka, iyo dufanka jirka.
Cudurka Peyronie - haddii unugyada nabarku ka soo baxaan xubinta taranka
Khamriga iyo daroogada / daroogada
Dhaawacyo ama qalliinno ku dhaca laf-dhabarka ama miskaha
Daawaynta qanjirka 'prostate' ama kansarka qanjirka 'prostate'
Maskaxdu waxay door weyn ka ciyaartaa kacsiga galmada. Waxyaabo dhowr ah oo saameeya kicinta galmada ayaa ka bilaabma maskaxda. Sababaha nafsaaniga ah ee ED waxaa ka mid ah:
Walaac, niyad jab, ama xaalado kale oo maskaxda ku dhaca caafimaadka
Dhibaatooyinka xiriirka ee ka dhasha isgaarsiinta oo liidata, walaac, ama walaacyo kale
Nolol galmo oo aan lagu qancin
isku kalsooni hoose ama xishood ama
Awood la'aanta inaad uur yeelato lamaanahaaga
Kahor intaanu daryeel bixiyahaagu kuu qorin avanafil adiga, wuxuu eegi doonaa oo keliya arrimaha kor ku xusan, laakiin sidoo kale kuwa soo socda:
Khataraha wadnaha iyo xididdada dhiigga
Haddii aad leedahay xaalad wadne-dhiigeed horay u jirtay, waxaad yeelan kartaa halista wadnaha marka aad galmo sameyneyso. Sababtaas awgeed, daaweynta cillad la'aanta erectile iyadoo la adeegsanayo avanafil laguma talin karo kuwa qaba xaalad wadnaha iyo xididada.
Bukaannada ay wadnaha bidix ka xanniban yihiin ama kuwa leh xakamaynta cadaadiska dhiigga ee madax-bannaanida ayaa u nugul Stendra iyo vasodilatoreyaasha kale.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala PDE5 waxay soo sheegeen kacsi soconaya in ka badan afar saacadood. Qaarkood sidoo kale waxay soo sheegeen kacsi xanuun badan oo soconaya in kabadan lix saacadood (priapism). Haddii aad la kulanto mid ka mid ah xaaladahaas, waa inaad raadsataa daryeel caafimaad oo degdeg ah. Sababtuna waxay tahay unugyada xubinta tarankaaga oo dhaawac soo gaari kara haddii aad dib u dhigto waxaadna lumin kartaa awooddaada si joogto ah.
Bukaannada qaba cilladaha anatomical guska (cudurka Peyronie, angulation, or angulation) waa inay u isticmaalaan avanafil taxaddar badan. Sidoo kale, bukaanada qaba xaaladaha sababi kara priapism waa inay sidoo kale taxaddaraan markay isticmaalayaan avanafil.
Haddii aad isku aragto aragti lumis inta aad isticmaaleysid Stendra ama wax kale oo ka hortagayaasha ah PDE5, waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga sida ugu dhakhsaha badan si aad u hesho daryeel caafimaad oo habboon.
Aragga oo yaraada wuxuu astaan ​​u noqon karaa NAION, xaalad ku dhacda dadka qaarkood ee isticmaala daawada PDE5. Inbadan dib u eegista avanafil, waxaad ogaan doontaa inay tani tahay xaalad aan dhif ahayn, laakiin waa inaad ka feejignaataa.
Tani waa xaalad kale oo dhif ah oo la xiriirta ka hortagayaasha PDE5. Haddii aad isticmaaleysid avanafil oo aad la kulantid lumis lama filaan ah ama maqal yari, u digo dhakhtarkaaga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Maqal la'aanta badanaa waxaa weheliya dawakhaad ama tinnitus, laakiin ma cadda in calaamadahaasi ay ka imaanayaan ka hortagayaasha PDE5.
Waxay ku xiran tahay dhakhaatiirta inay go'aamiyaan sababta dhabta ah ee astaamahan, laakiin haddii aad la kulanto, way ku caawin laheyd haddii aad joojiso qaadashada avanafil illaa aad ka hesho baaritaanka saxda ah ee dhakhtar.
Stendra waa a ammaan, daawo wax ku ool ah oo kaliya leh waxyeelo yar, oo midkoodna aan badneyn. Tusaale ahaan, madax xanuun, waxyeelada ugu badan ee Stendra, waxay kaliya saameysaa boqolkiiba 10 ilaa XNUMX ragga isticmaala daawada.
Saameyn kale oo caadi ah ee avanafil waa la dhaqaa. Laga soo bilaabo dib u eegista avanafil, waxaa la ogaaday in xaaladdan ay ku dhacdo inta udhaxeysa 3 - 4% dadka isticmaala. Madax xanuun iyo dheecaan ka soo baxa natiijada ka soo baxda avanafil ee ku saabsan socodka dhiigga iyo dhibaatooyinkaas soo raaca ah sida caadiga ah way libdhaan saacado kadib. Dhibaatooyinka kale ee avanafil waxaa ka mid ah ciriiriga sanka, calaamadaha hargabka (nasopharyngitis), iyo dhabar xanuun. Dhibaatooyinkaan dhan ee 'avanafil' waxay ku dhacaan boqolkiiba in yar oo isticmaaleyaasha ah.
Xagee laga iibsadaa Avanafil
ma waxaa rabtaa iibso avanafil? Hadday sidaas tahay, waa inaad doorataa iibiye avanafil lagu kalsoon yahay oo kuu dammaanad qaadi kara in budada avanafil ee aad iibsanaysaa ay tahay tayada ugu fiican. Waxaan nahay alaab-qeybiye noocaas ah. Waxaan si toos ah uga helnaa alaabtayada CMOAPI, oo ah shirkad caan ah oo soo saaraha avanafil ah.
CMOAPI ma soo saarto avanafil oo keliya laakiin sidoo kale waxay soo saartaa daawooyinka kale ee qalalka kacsiga. Ha ka welwelin qiimaha avanafil. Waxaan rabnaa inaan kula wadaagno si aan kuugu siino avanafil sanado badan. Taasi waa sababta kharashkeena avanafil uu yahay mid aad u saaxiibtinimo badan.
"FDA waxay u oggolaatay Stendra cillad aan caadi ahayn" (War-saxaafadeed). Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA). 27-Abriil, 2012.
"Spedra (avanafil)". Wakaalada Daawooyinka Yurub. Raadin 17 April 2014.
US 6797709, Yamada K, Matsuki K, Omori K Kikkawa K, "Aromatic nitrogen-ay kujiraan 6-xubnood oo xayndaabyada wareega ah", oo la soo saaray 11 Disembar 2003, oo loo xilsaaray Tanabe Seiyaku Co
"VIVUS waxay ku dhawaaqeysaa iskaashiga Avanafil iyo Menarini". Vivus Inc. Waxaa laga keydiyay asalka markay ahayd 2015-12-08.
"VIVUS iyo Metuchen Pharmaceuticals waxay shaacinayaan heshiiska shatiga ee xuquuqda ganacsiga ee STENDRA". Vivus Inc. 3 Oktoobar 2016.